Eebaha Jinniyona ah — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Sidaas marka aan bilaabaan in ay ka hadlaan oo ku saabsan Ciise iyo marka aan bilaabaan in ay ka hadlaan Ilaah dadka mararka qaar u maleeyaan in qaybaha isku. Waxay u malaynayaan caalamka oo dhan sida dagaal runtan u dhexeeya Ilaah iyo Devil ah. Iyo sida oo dhan of sheekooyinka aannu u jecel, aan ka yaabaynin dhamaadka ay u arkaan oo ku guuleystay. Waa Ciise oo keliya wakiilka ah ee wanaagsan in aan rajaynayaa guul? Waa Ciise oo keliya qof kale oo sheekada?
Well in Injiilka Markos aan helno fursado badan oo ay u arkaan Ciise la macaamilaan ciidamada wajiga xun in wajiga. Sidaas daraaddeed waxaan u socoto si loo eego sheeko oo isku day in aad ka jawaabto su'aashan. Oo waan la diriri lahaa in uu jiro dagaal ka dhex socota Ciise iyo ciidamada xun, laakiin ma ahan dagaal cadaalad ah. Ha ee furo Mark 5.
Ilaa waqtigan in Injiilka Markos, Ciise ayaa la barayay oo dad badan waxay bilaabeen inay soo ururiyaan iyo dhagaysan waxbariddiisa. Goortii makhribkii la gaadhay waxay heshay Doonta oo u dhoofay. Tani waa sheekada halkaas oo duufaan yimaado, xertii argagax, iyo Ciise xasiliyaa dabaysha kalimadiisa, "Peace, aamusa. "Sidaas waxay ahaayeen kulmay mucaaradka xad-dhaaf ah iyo badaha iyo Ciise watay daryeelka waxaa ka mid ah. Sida ugu dhakhsaha badan ay bilaabaan in ay nastaan ​​ay haatan waxaa la kulmay mucaaradka more.
Aynu akhri qoraalka, laga bilaabo aayadda 1.
Waxay yimaadeen dhanka kale oo badda yimid, dalka Gadareni. Markaasaa Ciise u degay doonnida ka soo degeen, kolkiiba waxaa la kulmay baxay xabaalaha nin jinni wasakh leh qaba. Wuxuu xabaalaha ayuu dhex noolaa. Oo ninna isaga mar dambe xidhi kari, xitaa ma silsilad, waayo, wuxuu inta badan la xidho Biro Naar ah iyo silsilado, laakiin waxa uu wrenched silsilado la'aantiis, oo wuxuu ku jejebiyey Biro Naar kala burburiya oo kale. mid ka mid No… lahaa xoogga… si ay isaga hoosaysiiyo. Habeen iyo maalinba xabaalaha ayuu dhex iyo buuraha dushooda uu had iyo jeer iyagoo qaylinaya oo dhagaxyona isku jarjaraya. Oo markuu Ciise meel fog ka arkay…, ayuu ku soo orday oo hortiisa ku dhacday. Oo iyagoo qaylinaya oo leh cod weyn ku, ayuu yidhi, "Maxaa idiin sameeyo ila, Ciise, Wiilka Ilaaha sarow? Waxaan idinku dhaarinayaa Ilaah, Ha i silcin. "Waayo, isaga si ayuu yidhi, "Ka soo bax ninka, jinni wasakh!"Markaasaa Ciise weyddiiyey, "Magacaa?"Waxa uu ku jawaabay, "Magacaygu waa Legion, waayo, annagu waa badan nahay. "Oo dadaal uu isagii ka barinnay inuusan u diro dalka ka maqan. Haddaba daaqsin weyn oo doofaarro ah oo daaqaysa waxaa halkaas indheheeda, oo waxay ka baryeen, oo wuxuu ku yidhi, "Noo dir doofaarrada; aynu iyaga u soo galaan. "Sidaas daraaddeed wuxuu iyagii siiyey fasax. Markaasaa jinniyadii wasakhda lahayd baxeen,, oo waxay galeen doofaarrada, iyo lo'da, tirintii abbaaraha laba kun, jarka hoos bay uga yaacday ilaa badda bangiga galay ayaa Maanshaynay Badda. xoolo dhaqato ka soo cararay oo u sheegay in magaalada iyo beerahaba. Oo dadkii soo baxay inay arkaan waxa ay ahayd in uu ka dhacay. Oo waxay yimaadeen ayaa Ciise yimid oo arkay nin jinni-hanataan, mid ka mid ah kuwaas oo miyir qaba, waxaa fadhiya, dhar sita oo miyir qaba…, wayna ka cabsadeen. Oo kuwii arkay waxay iyaga u tilmaamay wixii ku dhacay nin jinni iyo doofaarrada. Kolkaasay bilaabeen inay ku baryayaaye Ciise inay ka tagaan gobolka. Sida uu ku dhaco ayuu doonni fuulay, ninkii la jinniyo qaba baryeen inuu isaga la joogaan. Oo isagu ma uu oggolaan isagii, laakiin wuxuu ku yidhi isagii, "Tag guriga si saaxiibadaa una sheeg sida ay u badan, Rabbigu wuxuu kuu sameeyey, iyo sida uu kuugu naxariistay. "Markaasuu tegey oo bilaabay inuu Dekabolis ku naadiyo waxa weyn oo Ciise u sameeyey,, iyo qof kasta oo ka yaabay. (Mark 5:1-20 ESV)
waxaan. Ciise kulan jinku yeelan Man (5:1-6)
Sidaas daraaddeed sida ugu dhakhsaha badan ay talaabo doonnida ka soo degeen ay kulmeen ninkan jinni wasakh leh qaba. jinni wasakh asal ahaan waa uun jid kale ee leh Jinni. Ninkan oo iyaga la kulmay waxaa jinni qaba. Tilmaanta qoraalka siinayaa isaga waa horjoogsado.
Waxa uu dhintay wuxuu jiray. Waxa uu jecel yahay shirkadda dhintay, shirkadda nool. Oo isna wuxuu lahaa xoog sarreeyaan, aad u badan si ay silsilado lahayn isaga joojin kari waayay. Wuxuu kaliya kala jejebiyey. Waxa uu had iyo jeer qaylo iyo iyagoo qaylinaya. Waxa uu jidh ahaan qudhiisa wax yeesho, isaga qudhiisa ku garaaceen, isku jarjaraya. Ninkan loo jeediyo.
Waa nooc ka mid ah oo nagu adkaynaya in qiyaasi noocan oo kale ah cadaab jinka ee maanta. Mid ka mid ah, maxaa yeelay, dad badan oo naga mid ah ayaa joojiyay rumeeyaan sarraysa ee. iyo marka labaad, maxaa yeelay in badan oo naga mid ah ma arag cadaab jinka in qofka. Laakiin waxaan rabnaa in aad isticmaasho, malaha ila daqiiqad ah.
Maxaan sameyn lahaa haddii aan nin arkay? Waad wadida guriga maalin maalmaha ka mid oo arag walaal ku nool qabuuraha, qeyliyo in xanuun iyo Cadaab. Waxaan ogahay. lahaa waxaan la wacaya nooc ka mid ah amar inuu u soo dhufsan. Waxaan isaga ay taabo lahaa. Waxa uu qatar ku qudhiisa iyo dadka kale oo isna ma ahan in uu miyir. Waxa uu u baahan yahay caawimo. Well dadka dalka Gadareni, ma aan ogayn wixii aad samayn isaga la. Waxay isku dayeen in ay kor u aragheela, balse ma aysan shaqayn. Waxaan hubaa in ay cabsi our ee fikirradoodii.
Waxaa jira dad sidan oo kale in maanta, kuwaas oo macno ahaan u xanuunsanaya, isaga oo kale. Iyada oo codad madaxooda in, iyo u badnaanta rabshado, kuwaas oo isku jareen. Waxaan u kala saaro sida waali Diintooda ama niyad-jabka, laakiin waxaan hubaa in badan oo ka mid ah xaaladaha this, dhammaantiin ma aha, laakiin qaar badan oo ka mid ah xaaladaha, waxa ay tahay dulmi jinka. Oo mid ah magaalooyinka ay dadka sheekada, garan mayno waxa la sameeyo iyaga la ahayn isku day inaad iyaga ku hoosaysiiyo oo ka naftooda iyo dadka kale waxyeelo u sii. Waxaan kaliya siyaabo badan oo horumarsan inay sameeyaan in hadda. Waxaan leenahay hay'adaha iyo qaybaha psyche leh qolal leh oo ay derbiyo jilicsan iyo daawooyinka.
Sababta uu u craziness waa ka badan dhaawacyada qaar ka mid ah in loo beddeli uu state of maanka. Ciidamada ruuxi ah shar ah ayaa la wareegay jidhkiisa oo waxaa isaga xasuuqayay! Ma jecla nool sidan. Waxa uu la dulmay. Waxa uu qabtay, lagu hayo maxbuus, jirdilay ka dhanka ah doonistiisa.
Jinniyona Ilaah iyo qastiyadiisa uu dadka ka soo horjeeda
Ha walaalo la khiyaaneeyey iyo walaalahaa,. Jinniyona yihiin dhabta ah. Waxay tahay ruux. Waxay xun tahay oo ay u shaqeeyaan ka dhanka ah ujeeddooyinka Ilaah. In Injiilka Markos, Ciise ayaa u badan oo baxsad-tago oo jinniyo qaba. Waxa uu leeyahay dhacdo aad u la mid ah ee cutubka 1. Oo wakhtiga intiisa badan ee jinniyo Injiillada waxaa cadaadinayaan dadka oo isku dayay in la burburiyo uunka Ilaah. Iyada oo nin this gaar ah, waxay isagii waxaa dehumanizing. Waxa ay isku dayayaan in ay wada baabbi'in image Ilaah isaga. Jinniyona doonayaan in ay tirtireyso iyo hor joogsan ujeedooyin Ilaah ee dunida. Oo Ilaah wuxuu leeyahay, in uu xukunka, ogol yahay, kuwaas oo ciidamada xumaan ku noqon shaqada.
shaqada Jinniyona 'oo kaliya ma aha eg noocan oo kale ah hanti iyo Cadaab in kastoo. Sida arrin xaqiiqada, Mu'miniinta indwelled Ruuxa Ilaah ma la hantiyo karaa. Weli way jiraan oo shaqaynayaan na weerarka. Waxay noo jirrabin dembaajiyey. Waxay faafin waxbarashada been ah. In 1 Timothy 4, Paul oo ku baaqay in waxbarista beenta ah cilmiga jinniyada.
Jinniyona ayaa ka mas'uul ah inta badan xun ee dunida. Dabcan waxaan weli masuul ka tahay halka aan u dhali saamaynta ay. Iyo inay yihiin cadaawayaasha Ilaaha nool.
Man waxay kuorodaa meelay in Ciise (5:6)
Back ninkii. Sidaas ciidamada jinka xoog bataan si loola dagaalamo. Qofna ma waxa ay awood u samatabbixin. Waxa uu ahaa xabaalaha ka dadka sida ugu macquulsan fog fog. Laakiin markuu arko Ciise off in masaafada uu ku egyahay isaga iyo ku dhacaa, Isagayna.
Qoraalkani waxa uu u helo wax yar ka xeelad badan halkan waayo, jinniyo ku ninkan hadlo, laakiin waxaan qabaa qoraalka na u keenaysaa in ay aaminsan yihiin in ninku wuxuu ahaa in gacanta markii uu Ciise u soo orday. Wuxuu arkaa Ciise, oo waa og yahay waxaa laga yaabaa in Ciise ku samayn kartaa wax ku saabsan jinniyo kuwaas oo ah kuwa saxariiriso. Waxaa laga yaabaa in Ciise wuxuu isaga ka soo dulmigii uu lacag la'aan ah karo. Waxa uu u arkaa macquul ah ee gargaarka iyo waddaa at fursad.
Waxaan wax ka nin jinni-hantiyeen dalkii ka baran kartaa halkan. Mana uu ogayn sida qof isaga ka samatabbixiyo?, laakiin bartey ayuu yiqiin kuwaas oo isaga samatabbixin karaan. Qaar ka mid ah oo naga mid ah waxay u baahan yihiin inay yimaadaan si ay dhibic isku this of brokenness, halkaas oo dhan waannu wada yeeli karo waxaa maamula in ay Ciise. Waxaan u baahan nahay in ay joojiyaan dooneysa inay awood doonista our, in lacagtayadii, Saaxiibbo iyo waxaan u baahan nahay in ay sii wadaan in ay Ciise! Ciise calls, "Ii kaalaya oo dhan si aad kuwa ku raran daallan oo culus, oo anna waan idin nasin doonaa in nafihiinna loogu. " Annagu garan mayno sida aan loo dhiibi doonaa, laakiin waxaynu og nahay kuwa sidaas samayn kara.
Waa la mid ah marka la reebo kuwa maskax ahaan aan daganayn qabashada. Ha iyaga stigmatize, iyaga neceb, jeesa oo iyagaad ku qosli. Waa in aan u naxariisanayaa,. In ka badan wax kasta oo kale, ay u baahan yihiin in la geeyo. Waa in aan guud u adeegtaan, isticmaalaan daawo haddii loo baahdo, laakiin iyaga farta Ciise u samatabbixiyaa. Oo Ilaah u barya iyaga la kulmi. Waxay u baahan yihiin kulan Rabbiga la. Daawada noo jebin karo, iyo la-talin naga caawin kartaa qabaa si cad u, laakiin Ciise keliya na oo dhan ka dhigi kara.
Ha i soo jiidi in ay ka qayb kale oo ka mid ah goobta aad fiiro.
II. Jinniyadu inay hadlaan, (5:7-13)
Sida ugu dhakhsaha badan waana ninka Ciise ka hor dhaco uu qayshado, "Waxa aad oo maxaad iigu Ciise, Wiilka Ilaaha sarow? Waxaan idinku dhaarinayaa Ilaah, Ha i silcin!" Qoraalka ayaa sheegay in uu u ooyaa in sababtoo ah Ciise wuxuu ku yidhi, "Ka soo bax aad jinni wasakh isaga." Tani waxay noo muujinaysaa in jinnigii wasakhda gudaha isaga la hadlayay, kanu waa.
Haddaba aan hore u dhismay in Ciise iyo jinniyada ma yihiin dhinaca isku. Ciise yahay Wiilka Ilaah oo jinniyo col ku yihiin ujeeddooyinka Ilaah. Sidaas daraaddeed aynu isku day in aad this rido muuqaal.
Tani waxay noqon lahayd sidii lagu guda jiro dagaal. Oo Aynu niraahno waddan shisheeye leeyahay, beeno qaar ka mid ah oo ciidamada Maraykanku ku yimaadaan si ay iyaga ku badbaadin iyo ilaalada xabsiga odhan, "Ah Ciidamada Maraykanka? Man waxa aad halkan ka samaynaysaa? waxa keliya ee aad ha kartaa wax na yeelayn fadlan? Fadlan ha na waxba ma yeeli!"Ma rabtaa ma noqon waalan? Waa sida, "Kanu sow ma aha dagaal? ma waa in aad la dagaalanka halkii dawarsanayay,?"Laakiin taasi muujineysa in tani ma aha dagaal caadi ah. Waxaa jira wax ka duwan oo ku saabsan dagaalka this.
Sidaas waxaan doonayaa in aan eegno afar waxyaalood kulan la Ciise ayaa shaaca ka qaaday oo ku saabsan jinniyo iyo xiriirka ay Ciise u.
1. Waxay yaqaanaan qofka uu yahay
Jinniyadii ayaa aan haysan si aad u weydiiso yaa waxaa iyaga hor taagan. Sida ugu dhakhsaha badan isaga arki waxay aqoonsadeen xaggiisaana loo Ciise. Waxay ku yidhaahdeen, Isagu waa Ciise, Wiilka Ilaaha sarow. Waxay kaliya ma ahan isaga wicin by magaca laakiin waxay aqoonsadeen oo uu status.
Tani dhab ahaantii codadka badan sida qirasho Butros ee Matthew 16 in Ciise yahay "Masiixa, ina Ilaaha nool. " Jinniyadii ayaa dhab ahaantii kaliya naadiyey, runta Ilaah aawadeed. Oo iyagu waxay leeyihiin aragti dheeraad ah oo isha ku galay wax weligeed badan dayidiisii ​​iyo dhammaan dadka ku xeeran. waxay yaqaanaan. Weli, way.
Waa kuwee Waxaan qabaa noo muujinaysaa runta cabsi. Walaalaha, waxaad ogaan kartaa Ciise kan, oo aan Ciise isagoo garanaya. Waxaa laga yaabaa inaad si Summit Church iman weekend kasta. Waxaad laga yaabaa in seminary. Waxaa laga yaabaa inaad dhagaysan podcast kasta oo kitaabka ku akhriyey fiqiga kasta. Laakiin ha u qaadan, waayo, waxaad dhihi kartaa Ciise kan, in aad isaga OGTAHAY.
Isaga Oge leedahay in la sameeyo oo qoto dheer, xidhiidhka ku dhow - isdhexgalka iyo la jecel iyo kalsooni ku qabka heer qoto dheer. Oge isaga ku saabsan yahay wax ka badan xaqiiqooyinka xafididda. Xafididda xaqiiqooyin aan waxa Ilaah wuxuu inoogu yeedhay si ay u sameeyaan. Oo Ilaah ma wacdaro la smarts buug aad. Waxaad dhihi kartaa wax run ah? Adiga kuu wanaagsan; sidaas awoodid jinniyada.
James 2:19 ayaa sheegay in, "Waad rumaysan tahay in Ilaah yahay mid keliya; aad si fiican u samayn. Xataa jinniyadu rumaysan-wayna gariiraan!" Haddii aqoonta Ilaah ayaa keentay in bedelitaanka nolosha, aad tahay ma ka fiican yihiin jinniyada. iimaanka runta ah muujinaysaa ilaa.
2. Waxay yaqaanaan Dadku wuxuu iyagii ka soo hor jeedaa doonaa
Waxa uu sheegay in, waxa idin maxaad iigu? Asal ahaan, maxaad halkan aad tahay? Iska kaaya daa! Oo iyagu waxay ogaan in Ciise, Wiilka Ilaaha ugu sarreeya ayaa u yimid inuu keeno boqortooyada Ilaah. Oo iyagu waxay ogaan Ciise ayaa u yimid inuu iska sameeyo xumaan oo dhan, iyo wax kasta oo cusub oo ka dhigi. Iyagu way og yihiin waxa ka mid ah oo ay u halligmaan. Iyagu way og yihiin in dhamaadka iyaga waa la baabbi'in doonaa, oo Ciise Masiix waxaa boqor ahaan doona.
3. Oo iyagu waxay ogaan Eebe waa dheeraad ah ka daran iyaga kana xoog badan
Waxay sheegeen in magaciisa Liijon. Tani waxaa loogu tala galay si ay u muujiyaan in ay jiraan kuwa badan oo iyaga ka mid ah. In Rome Legion ahaa shan ilaa lix kun oo askari. Sidoo kale, waxaan arkaynaa sida xoog leh ay yihiin. Waxaan ka hadleynaa ugu yaraan 5,000 jinniyada. Weli, ay dacwadooda u naxariista.
Ma jirto sabab cabsi haddii aad ka xoog badan cadowga ama haddii aad xataa waxay leeyihiin fursad.
Waligaa ma aragtay dad nacasiin ah oo kula hadli kulan weyn oo ku socdaan ee wareegyada laakiin aad uma arko dagaalka? Dadka sida caadiga ah ogaan marka ay gebihaanba ma jirto fursad inay ku guuleystaan. Tani waa waxa aan halkan ku arko. Waxa aan ku arkeyno waa daciif ah, Col adkaaday dawarsanayay naxariista.
4. Iyagu way og yihiin, Isagu waa xujo
Waxay ay ogaadaan in ay u leeyihiin in ay weydiiso wax fasax ah. Waxaad aadan codsan fasax ka siman. All oo dhan, Qorniinka ciidamada xun u baahan tahay ogolaansho Ilaah wax. Ka fikir story of Job. Shaydaanku wuxuu u baahan yahay ogolaansho Ilaah inay Ayuub u taabto oo loo ogol yahay oo kaliya in ay sameeyaan sida ugu badan ee Ilaah oggolaan doonaa.
Waxay meel ma aan tegi karo ama wax ku sameeyo oo aan ogolaansho ka mid ah Ciise. Ma qiyaasi kartaa waxa dunida noqon lahaa sida haddii Ilaah ma joojin iyagii? Haddii ay u lahaayeen jidkooda ay silcin lahaa oo dhan oo naga mid ah sida ay ninkan sameeyey. Laakiin Ilaah ma u ogolaadaan inay waana in aan isaga ku ammaani doonaa, waayo,.
Waayo, wax kastaaba isagay la abuuray, samada iyo dhulka, la arki karo iyo la arki karin, hadday yihiin carshiyo ama sayidnimo ama madax ama wax maamulka -all la abuuray isaga oo isaga u. (Kolosay 1:16 ESV)
Jinniyadii oo ka mid ah ayaa ka dhigay iyada oo loo marayo iyo Ciise. Iyagu waa caasiyiin, laakiin waxaa weli loo isticmaalaa sida pawns in uu qorshaha grand inuu isu off.
Awooda erayga Masiixu dhab ahaantii waa soo bandhigay halkan. Sida goobta hor leh "Peace, aamusa. "Waxaan u aragnaa awoodda ereyga Ilaah. Ciise waa Ilaah iyo marka uu hadlayana wuxuu ku amraa waa in loo sameeyo. Isagu ma weydiin, wuxuu ku amrayaa. The Word Ciise waa ka xoog badan madaafiicda ugu cuslaa. The Word of Masiix waa xoog badan yahay! Waxaa wada haya caalamka!
In sheekada ka hor inta this wuxuu tusay sayid abuurka. Sheekada intaas ka dib wuxuu muujinaysaa uu sayid jirrada. Ciise waa wax walba Rabbigood. Oo wuxuu ka samatabbixiyaa aqbalo.
Walaalaha, waxaan u leeyihiin in ay rumaysan Xukuntay adag in Ciise run ahaantii waa Sayidka sayidyada,. Kitaabku waxa uu barayaa in uu jiro gabi ahaanba waa wax jira oo aan ka yar yahay maamulka Ciise Masiix. Waxaa jira ma jiro geed, codka lahayn, cayayaan jirin, non-xoolaha, diin laawe lahayn, Muslim no, ma Hindu, malaa'ig ma, jinni ma, ma Ibliisku in waa ineysan iyo maamulka ee Ciise Masiix. Ilaah karta iney u oggolaadaan caasinimo muddo, iyo si uu oggolaan inay tagaan on gooni ka taliyaan in mudo ah, laakiin Ciise ka dhigi doonaa wax walba oo cusub oo uu waxaas oo dhan cagihiisa ka hooseeyey soo celin doonaa.
III. Ciise Lagu soo Man ee (5:14-20)
By erayga xooggiisa Ciise ayaa u dhiibay ninkii. Waxa uu dibadda u soo tuuray madaxda jinniyada.
Markii dadkii isaga arko uu halkaas ku fadhiya oo dhar sita oo miyir qaba. In daqiiqad walba is beddeleen. Markii ugu danbeysay ee ay aragtay isaga uu qudhiisu u burburinaya oo had iyo qaylo. Isna wuxuu ahaa mid si caadi ah sida aniga iyo adiga.
By Naxariistiisa Ciise ninkan soo celiyay. Ciise ayaa dunida yimid si loo soo celiyo uu abuuray in loo xumeeyey si by dembiga iyo dhimashada. Waxa uu wax walba heshiiyey Aabbaha.
Oo isna wuxuu muujinayaa naxariis ninkan oo isaga ka samatabbixiyaa. Ninkan, in kastoo Isaga waa la dulmay, oo dembi aniga iyo adiga oo kale. Ma uusan u qalmin in la samatabbixin.
Laakiin Ciise kuma samatabbixiyo ku saleysan waxa aad mudan. Isagu ma sugin in aad kasban hor wuxuu u dhaqmo naxariis. Ciise waa naxariis badan yahay, waayo, Ciise waa naxariis badan. Waxa uu jecel iyo daryeela uu abuuray.
Waxaa jira qof ruuxi ah ma si xoog leh, dembi ma aydin si xoog leh, wax kasta oo dhaafa talada iyo amarka Ciise. Maxaa yeelay, dhammaan uunka ku xiran yahay kan Xaggiisa. Oo markuu samatabbixin, Wuuna sameeyaa out of naxariistiisa u gaar ah, naxariis, iyo nimcadiisa.
Ciise naga gabi ahaanba wax ka samatabbixin kara,: iyada oo aan, qabatinka, niyad-jabka, xanuun, abuse, guurka xun, wax kasta oo waxa laga yaabaa inay. Ciise waa bogsiiye iyo samatabbixiyahayga aad. Waxay u ekaan karaan rajo, laakiin waxaan aragnaa in awoodda bixinta Masiixa halkan.
IV. Dadka ayaa jawaab (5:17-20)
Ma aha oo kaliya ayaa jinnoolihii lahaa kulanka uu la yeeshay Ciise, laakiin magaalada oo dhan uu leeyahay. Qaar badan oo iyaga ka mid ah goob joog dhacdo oo dhan, iyo kuwa kale oo maqlay wax ku saabsan. Sidee qof walba ka qabashada waxay kulan la Ciise?
dayidiisii ​​baqeen! Oo iyana weligood arkay xoog iyo amar caynkaas ah. Waxaa laga yaabaa in ay u cadhoon doofaarro ay orday off dhagaxii weynaa. Iyagu ma ay ogayn sida in ay ka jawaabaan isaga u! run ahaantii waxay baryaan inuu ka tago!
Dad badan ayaa maanta ma jecla Ciise. Wuxuu dhibsadayoo hannaankii caadiga ah ee nolosha. Ciise socotaa in dadka raaxo. Ciise comfy Little sanduuq kajirin. Haddii aad raadineyso weeyna isaga, waayo,, aad sii doonaa raadinta noloshaada oo dhan. Kor buu u ayna idinla dhaqdhaqaaqdo wax. Wuxuu demolishes gudcur iyo na ugu baaqaysaa in Nuurka.
The jinnoolihii hore ku jawaabtey gratefulness. Waxa uu doonayaa in aad raacdo Ciise iyo kadhibaataysan si ay ula joogaan. Ciise baa u sheegayaa in uu sii joogo una sheeg dadka kale. Wuxuu isaga Adeeca. Tani waa jawaab ku haboon in kulanka ay la yeelatay Ciise.
Goormay ahayd markii ugu danbeysay ee aad u sheegtay dadka kale wixii Rabbigu kuu sameeyey? Maxaa uu idinka korinay? Khasab ma aha in uu noqon riwaayado sida hanti jinka, laakiin way fiican tahay. Ma laga yaabaa in la samatabbixiyo ka halgan dembi gaar ah. waxay noqon kartaa jirrabaadda looga gudbo. Ma laga yaabaa in la bogsiinaya ka jirrada. Ama kuwa kale warramayay sidii uu idin korinay. U sheeg dadka kale!
Waxaan halkan ka eeg in ay suurto gal tahay ayey noo tahay inaan marag awoodda, nimcadii, iyo amarka Ciise iyo in aan weli nin xer ah oo noqon. Qaar ka mid ah ay ka jawaabaan isaga Dari Jireen, dadka kale la cadaawad, qaar ka mid ah la sacab kaliya Diintooda. None of kuwanu waa jawaabta Ilaah ku baaqay in la.
Wuxuu hubka taliyayaashii iyo kuwa amarka leh iyo iyaga bayaan u ceebaynaya, by iyaga kaga guulaysanaya isaga in. (Kolosay 2:13-15 ESV)
In kastoo Ciise dagaalo badan oo cadowga ku guuleystay intii uu dhulka, Isaga oo guuldaradii kama dambaysta ah ee xun dhacaya dhamaadka Injiilka Markos. Waxa uu gacmaha aad dagaalka ugu iskutallaabta. Waxaa muuqatay sida hadduu looga adkaaday in mudo ah. Laakiin wuxuu xooggayga oo dhan ugu soo kici lahaa.
At iskutallaabta Ciise, kuwaas oo ciidamada jinka saaray, ama taliyayaasha iyo kuwa amarka sida Paul iyaga oo ku baaqay in Kolosay, bayaan u ceebaynaya. Wuxuu iyaga ku ceeboobin. Wuxuu tusay qof walba sida ay yihiin daciif ah. Waxa uu tirtirayaa saamaynta ay. Waxa uu dharbaaxo kama dambaysta ah- ka hor.
Hadda oo dhan iyagoo caasi ah waa wax been ah. Ku dhawaad ​​sida horu Jamhuuriga. Ma jirin jidka guys kale ku guuleysan karo, laakiin Rabbiga ayay ku dhawri riixaya weheliyaan naftooda wax khiyaaneeya. jinniyadiina waa ka sii Inay ku caasiyoobaan Ilaaha, inkastoo ay si cad u horay looga adkaaday. Waxa uu shaqada u ballanqaaday of jir bilaabay. Oo markuu ku soo laabtay wuxuuna ugu dambeyntii ka adkaan doonaa cadaawayaashiisa.
Kaliya by jawaabaya shuqulkiisa iskutallaabta la tawbadkeen iyo rumaysad aynaan ka heli in ay ka faa'iideystaan ​​maamulka, xoog, iyo Liibaan Ciise. Isagu waa wax walba Rabbigood. Imtixaan qalbiyadiinna u gaar ah oo aan arko sida aad ka jawaabto Rabbiga this.
Tani waa nooca Rabbiga in aan doonayo in aan raaco. Mid ka mid ah waa kuwa ugu dhiibto, King a, Rabbi a, Qaadirka ah, iyo Badbaadiye ah naxariis. News Good The oo dalbaday in jawaab.
Maalmaha nasashada usbuucan, shar dhacdo in safka hore ee maskaxda ku. fal A naxdin leh oo xun oo ka dhacay Colorado. Waa in aan u murugoon. Waa in aan ka cadhoon. Laakiin waa in aan la yaabina haddii Ilaah ku guulaysan doonaa dhamaadka. dharbaaxo kama dambaysta ah ayaa lagu dhuftay.
Ciise ayaa ku guulaystay xumaanta at iskutallaabta. Orod Xaggiisa. Isaga hor dhici. isaga aamin. isaga raaca. ammaana. U sheeg Qaar kale.
kg • August 20, 2013 at 5:01 waxaan ahay • Reply
Waad ku mahadsan tahay wixii aad safar!!! waxaan “jeclahay” in logo cusub faana. aad u gelin kara on qaar ka mid ah dhar ama alaabta. jeclaan lahaa si aad u hesho a T-Shirt leh in. :)
Xusuuso: My Qodobka Read (8-19-2013) | Daily shidmay My